Branding Marketing လုပျခွငျးကရဲ့ကှာခွားခကျြကဘာလဲ | Myanmar Web Store
Marketing နှင့် Branding လုပ်ခြင်းရဲ့ ကွဲပြားချက်က ဘာလဲ?
#Marketing လုပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ,ဝန်ဆောင်မှုများကို တွန်းအားပေး၍ ဝယ်ယူချင်လာအောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
– ကျွန်တော်တို့ Product ကို အသုံးပြုပါက သင်၏ Problemများအားလုံး ပျောက်ကင်းစေရမည်။
– ယခု ပထမပတ်အတွင်း ဝယ်ယူလျှင် promotion များ lucky draw များပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ စသည်တို့မှာ Marketing လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
#Branding ဆိုသည်မှာ မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်း,ဝန်ဆောင်မှု,ကုန်ပစ္စည်း များ၏ မှန်ကန်သောအရည်အသွေး နှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများကို ဖော်ပြပြီး customers များ ဝယ်ယူချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Branding လုပ်ခြင်းကတော့ “BUY ME” ဝယ်ယူသုံးစွဲပါ ဟူ၍ အသုံးမပြုဘဲ “This is what I am. This is why I exist. If you agree or like me, you can buy me, support me and recommend me to your friends ” ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘာဖြစ်ပါတယ် (သို့) ကျွန်တော်တို့ ဘာရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်တည်ရှိပါတယ် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ဝင်စားနှစ်သက်ပါက ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ဟူ၍ အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
Marketing နှင့် Branding ကနေ ဘာအကျိုးအမြတ်ရရှိမလဲ။ မိတ်ဆွေတို့အနေဖြင့် Marketing မလုပ်ခင် မိမိဘာကို target ထားလဲ ခေတ်ကရော ဘယ်လိုပြောင်းလဲတည်ရှိနေလဲ… အစရှိသည်တို့ကို well researched and well exceuted marketing လုပ်မှသာ ထိရောက်သော လိုချင်မှုကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဓိကတော့ marketing လုပ်ခြင်းဖြင့် ရောင်းအားတက်လာပြီး လူသိများလာမည်ဖြစ်သည်။
Branding လုပ်ခြင်းအားဖြင့် Customers များထံမှ ယုံကြည်မှုပိုမိုတိုးပွားလာပြီး loyalty ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းခြင်းတူလျှင်တောင် ဘယ်ကုမ္ပဏီကမှ ဘယ်သူထံမှ ဘယ်ဆိုင်မှ ဘယ်တံဆိပ်မှ ဆို၍ အမြဲတမ်း customers များတိုးပွားလာမည်ဖြစ်သည်။
Myanmar Web Store မှ James Heaton ရေးသော The difference between Marketing and Branding ကို ကိုးကား၍ မျှဝေတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
To Learn Marketing ->
hello@myanmarwebstore.com +9592017178 +65 85006525